Bentley: Ngwa maka mobiles na ndị ọrụ - ọ dịghị DGN - Geofumadas
August, 2013 Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, innovations, Microstation-Bentley
Nkwado nke ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwaọrụ maka Geo-engineering enweela na nhazigharị ha na mmegharị nke usoro teknụzụ. Ọnọdụ ahụ akara nke ọma, n'ụzọ ha si ere ọpụrụiche ha na nkwukọrịta ụlọ ọrụ ha, n'agbanyeghị na kwa ụbọchị ọdịiche dị n'etiti ọzụzụ na-esiri ike karị ikpebi:
ESRI, n'ahịa geospatial. Site na asọmpi siri ike sitere na OpenSource na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ clones dị ka SuperGIS.
AutoDesk, na 2D / 3D imewe maka injinịa na mmegharị. OpenSource a na-enyochaghị nke na-anaghị enwe ọganihu na mpaghara a yana ịghaghachi mgbe niile nke IntelliCAD.
Bentley, na usoro okirikiri. Ejiri ya na ndị ahịa nwere mmasị na injinịa yana ọrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ usoro njem.
Usoro ihe omimi ohuru na-elekwasị anya na itinye usoro nke AEC, omenala nke ihe omimi, idi nso na ndi na-emeputa ihe ndi ozo na imeghari na igwe mkpanaka ndi na-eji igwe ojii eme ihe.
N'okwu a, Achọrọ m inyocha ihe Bentley Systems gụnyere n'ime setịpụrụ ngwa ndị a maara dị ka iWare, nke bụ ihe na - enye obi ụtọ site na ihe anyị na - ekwu banyere mbọ ime DGN nwere ike ịnweta ya maka nyiwe ndị ọzọ na nrigbu nke ụdị m-erite.
Ngwa ngwa maka ndị ọrụ nke Nhazi, Ịrụ ọrụ, Nwube na Ọrụ (AECO).
Bentley View. Ekiri iji gụọ DGN, DWG faịlụ na ụdị i-webatara Microstation V8i
Ogwe Ngwaọrụ AGS. Ngwa iji kwado faịlụ na geotectonic data na gINT software format (.ags) ma jiri ha na Excel
FlexUnits. Iji mee ntụgharị otu.
Structural Dashboard. Agbanwe na jikwaa data ma ọ bụ usoro arụmọrụ.
Nhazi mmekọrịta. Na ngwa a ị nwere ike ịlele, nyochaa ma mekọrịta data ụdị data.
Mmekọrịta mmekọrịta Structure maka iPAd, iPhon na iPod Touch. Otu ngwa maka iOS ngwaọrụ.
Nyocha Nyocha Navigator. Na nke a ị nwere ike ịlele ụdị 3D site na iPad, ọbụlagodi na ịnweta data ejiri na ProjectWise.
SearchWiz Explorer Mobile. Na ngwa a enwere ike ịmepụta, ịnyagharịa ma lelee dọkụmentị site na iPad, echekwara na ProjectWise.
i-nlereanya plug-in maka Adobe Reader. Nwere ike ịhụ i-ụdị agbakwunyere na pdf faịlụ ndị agbakwunyere data, gụnyere ikiri, mbugharị, ịtụgharị na ibipụta ụdị 3D.
Bentley Configuration Explorer. Mmasị, ịhụ ka esi kọwaa mgbanwe nke ngwa Bentley arụnyere.
Njegharị mbugharị. O doro anya na Pano Review dị mma, nke na-enye gị ohere ịchọgharị ihe 3D na ụdị site na iPad.
Bentley Pointools View. Nke a bụ ngwa desktọọpụ maka iji anya nke igwe ojii na-emepụta ihe na Bentley Pointools, maka ndị na-enweghị sọftụwia ma ọ bụ ikike ahụ.
Bentley Pointools PODcreator. Nke a bụkwa ngwá ọrụ desktọọpụ, nke ị nwere ike ịmepụta 3D ụdị si na ígwé ojii nke isi ihe dị iche iche weghaara.
InspectTech Collector Mobile. Maka iPad, karịsịa maka nyocha na ọrụ akụrụngwa ma ọ bụ usoro njem; were njikwa na GPS, see foto, dejupụta faịlụ ma ọ bụ mepụta akụkọ; Ma ọ bụrụ na ejiri AssetWise, enwere ike ijikwa ndụ na arụmọrụ nke ihe eji enyere ndụ aka.
Onye na-elekọta ubi. Yiri nke gara aga, ya na ụdị nke gbakwasara ProjectWise.
Ngwa ngwa maka ndị ọrụ Microsoft.
Bentley DGN Reader maka Windows. Enwere ike ile faịlụ DGN na ụdị i-eji Windows Explorer na Microsoft Outlook.
i-Model Driver for Excel. Iji lelee faịlụ DGN na ụdị i si na Microsoft Excel.
i-Model Driver for Access. Yiri nke gara aga, na-eji Microsoft Access.
i-nlereanya Driver maka Crystal Akụkọ. DGN na m-ụdị na SAP Crystal Reports
i-nlereanya Driver maka Visual Studio. Nke a anyị agaraghị eche, mana anyị chee na ọ ga-adọta uche ndị mmepe jiri Microsoft Visual Studio
i-nlereanya ODBC Driver maka Windows. Site na nke a, ị nwere ike ịmepụta ọrụ njikọ iji nweta data nke ihe-atụ sitere na ndị njikwa nchekwa data dị iche iche site na ODBC.
i-nlereanya plug-in maka Adobe Reader. Ele iji Adobe Reader 3D pdf faịlụ, otu onye ahụ aha ya na ndepụta mbụ.
Bentley Configuration Explorer. E kwukwara na ndepụta nke mbụ.
Ngwa nke Bentley maka ngwaọrụ mkpanaka.
A na-akpọ ụfọdụ n'ime ha na ndepụta mbụ.
i-nlereanya Optimizer maka iPad. Site na ngwaọrụ a enwere ike ịmepụta ụdị 3D nke enwere ike ịlele ya na iPad, na iji Microstation ma ọ bụ i-model Composer desktop ngwa.
ProjectWise i-nlereanya Packager. Otu dị n'elu, mana iji ProjectWise iji mepụta i-nlereanya.
Ngwakọta mmekọrịta Structural maka iPad, iPhone, na iPod Touch. Kwuru na ndepụta mbụ, ọ na-enye ohere ịlele ụdị usoro eji ngwaọrụ iOS dị iche iche.
Bentley Map Mobile. Nke a bụ nsụgharị maka data XFM agbakwunyere site na Bentley Map. Ọ dị mma maka ibipụta ma ọ bụ nzube cadastral yana ngwa ọrụ Bentley.
Bentley Map Mobile Publisher. Nke a bụ maka imepụta ụdị-i nwere ike iji Bentley Map Mobile.
Bentley ngwa maka AutoDesk Revit ọrụ.
i-nlereanya plug-in maka Revit. O kwere omume na ngwa ọrụ a iji gbanwee ụdị arụ ọrụ na Revit Architecture, Revit MEP, na Revit Structure na usoro mgbanwe maka ndị ọrụ Bentley MicroStation, Bentley Navigator, AECOsim Building Designer ma ọ bụ ngwa Bentley ọ bụla dabere na Nrụpụta.
ISM Revit nkwụnye. Nke a bụ ngwá ọrụ na-adọrọ mmasị, n'ihi na n'adịghị ka nke gara aga, ọ na-eme ka mmekọrịta data dị n'etiti faịlụ ndị ejiri Revit rụọ, na-eji usoro mgbanwe maka data nhazi.
Sistemụ arụmọrụ RAM - njikọ Revit. N'okwu a, mmekọrịta dị n'etiti Bentley RAM na AutoDesk Revit.
i-nlereanya plug-in maka Adobe Reader. Edere nke a na ndepụta dị n'elu, mana ọ bụkwa nhọrọ maka ndị ọrụ AutoDesk, iji lelee data site na iji Adobe Reader.
Ná mmechi, ihe na-akpali ndepụta na nke Bentley na-atụ anya ka ndị ọrụ na-ewe ukwuu arụpụtaghị ihe ọmụma na ruo ugbu a nwere ike na-ele ya anya na desktọọpụ ngwaọrụ gburu na Microstation.
Na vidiyo a, ị nwere ike ịhụ ọrụ nke Bentley Map na-agba ọsọ na ngwaọrụ Android.
Enwere ike ibudata ngwa ebe a.
Previous Post«Previous Ụdị ihe atụ ahụ: Webinar
Next Post University mmekọrịta mụ na CartographerNext »